नेपाली भुमी अतिक्रमण गर्ने चीन विरुद्ध ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन !:: Naya Nepal
नेपाली भुमी अतिक्रमण गर्ने चीन विरुद्ध ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन !
काठमाडौं । नेपाली भुमी अतिक्रमण गरी चीनले भवन निर्माण गरेकाे पाइएपछि लुम्बिनी नागरिक समाजले आपत्ति जनाएकाे छ। समाजले चिनियाँ हस्तक्षेपकाे खेदाे खन्दै नेपालमा चीनकाे दादागिरी चल्दै भन्दै चीनविरूद्द नारा लगाएकाे छ।
समाजका कार्यकर्ताहरूले नेपालकाे भूमि फिर्ता गर, चिनियाँ बिस्तारवाद मुर्दाबाद, बुद्दिष्ट र मुस्लिममाथि अत्याचार बन्द गर भन्दै चीनविरूद्द नारा लगाएका छन्। समाजका एक कार्यकर्ताले भने, ‘हुम्लामा चिनियाँहरुले नेपालको भुमिमा भवनहरु बनाएको छ।ओलि जी भाडामा दिनु भएको छ या बेच्नु भएको छ एकचोटि चुटकुले भाषा भए पनि नेपाली जनतालाइ बताइ दिनु।’
उनले नेपाली भूभागमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रुपमा नौ वटा व्यापारिक प्रयोजनका भवन बनाएको जानकारी दिए। ‘चिनियाँ पक्षको जिम्मेवार अधिकारीसँग आफूले बुझ्न खोजेपनि त्यो प्रयास सफल सकेन।’ उनले भनेका छन् । हाल भवन निर्माण भएको स्थानभन्दा केही परको डाँडामा १२ नम्बर सिमा स्तम्भ रहेको छ। त्योसँगै ११ नम्बर सिमा स्तम्भ भने हराएको छ। जो हालसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन।
नेपाली भूमिमा चिनियाँ अतिक्रमण: नेपाली भूमिमा चीनले पनि आफ्नो सेना उतार्यो !
काठमाडौं : छिमेकी भारतले वर्षौंदेखि निरन्तर नेपालको दक्षिणी सीमा मिचिरहेको छ। दुई ठूला देश चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो भूमि बचाउन पटक पटक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। कालापानी क्षेत्रको ठूलो भूमि फिर्ताका लागि एक वर्षयता नेपालले संघर्ष गरिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेको खबर बाहिर आएको छ।
भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहेको नेपालका लागि घरीघरी चीनको व्यवहार पनि टाउको दुखाइको विषय बन्दैछ। नेपालले भारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा पनि जारी गरिसकेको छ। नक्सा जारी गरे पनि ती भूमि नेपालको उपभोगमा ल्याउन लामै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा मिचेर सडक निर्माण गर्दा नेपालसँग सीमा जोडिएको अर्को राष्ट्र चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थियो। यो विवाद दुई देशले आफैं मिलाउनुपर्ने धारणा उसको थियो।
तर पछिल्लो चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेर भवनहरु नै बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको खुलेको छ।
‘सिडियो सा’वहरु जिल्लाबाट शुक्रबार नै आउनुभएको हो,’ गाउँपालिका प्रमुख लामाले थाहाखबरसँग भने, ‘यहाँबाट चाहिँ म पनि सँगै गएँ, आइतबार माथि गएर त्यही दिन नै तल झरेका हौँ।’
सिडियो सा’व, हामी कोहीसँग पनि यो भूमि हाम्रो हो भनेर भन्‍न सक्ने आधार नभएकोले निरीक्षण मात्रै गरेर फर्किएको उनले बताए। त्यहाँ भएको सामान्य छलफलमा चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरुले नेपाली टोलीसँग उक्त भूमिहरु चीनकै भएको र चीनकै भूमिमा भवन बनाएको दाबी गरेका थिए।
नेपाली चिनियाँ अधिकारीहरुसँग छलफलका लागि नभई बोर्डर निरीक्षणका लागि गएको थियो। ‘हाम्रो १२ नम्बर पिल्लर र ११ नम्बर पिल्लर लाप्चामै हो,’ लामाले भने, ‘अहिले ११ नम्बर पिल्लरको नाम निसानी छैन। १२ नम्बर चाहिँ यथावत छ। ११ नम्बरको पिल्लर नहुँदा भवन बनाएको क्षेत्र उता पर्छ कि यता पर्छ भनेर दाबीका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरुले त नक्सा देखाउँदै यो भूभाग हाम्रो हो। त्यही भएर भवन बनाएका हौँ भने।’
खुला सीमा हुँदासम्म नेपाली त्यहाँबाट नजिक पर्ने चीनको बजार पुगेर सामान खरिद गर्ने गर्थे। लामाले प्रस्ट्याए, ‘त्यहीँ बाटो भएर तीर्थयात्री मानसरोवर जान्थे। हिँडेर जाने सबैभन्दा राम्रो रुट यही होला।’
सशस्त्रका डीएसपीको टोली पुग्यो